Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Wellbeing Magazine ayaa leh Ken Kladouris
Horraantii sannadkan, Ken Kladouris wuxuu ku dhawaaqay bilaabista koorsadiisa tooska ah ee internetka ee aadka loo sugayo oo cinwaankeedu yahay "Wanaagsanaanta Guusha."
Koorsada waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo casharo taxane ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo shaqsiyaadka in ay si fiican iskula jaan qaadaan si ay u helaan awoodooda buuxda.
Ganacsade Ken Kladouris wuxuu doortay inuu horumariyo deeqdan ka dib markii uu sannado badan galiyay is-horumarin, fahamka sida loo caawiyo ragga iyo dumarka inay sare u qaadaan naftooda, maankooda, jidhkooda iyo naftooda. Qeyb ka mid ah safarka Ken waxaa ka mid ah dib -u -noqoshada aamusnaan daba dheeraatay, iyadoo dib -u -noqoshadiisii ​​saddexaad iyo tii ugu dambaysay iyo casharradii laga bartay lala wadaagay Majaladda Wellbeing.
Dib -u -noqoshada sannadlaha ah ee aamusnaanta ah waxay ahayd nasasho iyada oo dhacdadu ay tahay Ken -na wuxuu rajaynayaa in sannadka dambe uu marti -geliyo dib -u -gurasho aamusnaan leh oo ka qalin -jabiya barnaamijkiisa.
“Waa run waxay yiraahdaan-safarka is-wacyigelinta ayaa ka fiicnaada maalgelin kasta oo geedi socodka ah. Waxaan rajeynayaa inaan la wadaago xitaa aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan dib -u -noqosheydii ugu dambeysay ee aamusnaanta xubnaha koorsada Wanaagsan ee Guusha. ”